ဝဲစိုဝဲခြောက်အမြန်ပျောက် =================== မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးပညာတွင် လွယ်လွယ် ကူကူနှင့်ဂုဏ်ယူစွာ လက်တွေ့သုံးနိုင်တဲ့ ဆေးနည်းလေးတွေပါ။လိုသူတို့ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ် — ၀ဲစို/၀ဲခြောက်အမှန်ပျောက် ================== ခြေဖ၀ါး၊လက်ဖ၀ါးကြားတွင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ပေါက်တတ်သော ၀ဲစို/၀ဲခြောက်ကိုကုသလိုပါက သင်္ဘောစေးနှင့်လက်ချားမှုန့်ကိုရေနှင့်ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးကြည့်ပါ။မကြာမီပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ အသားမာ အသားမာကိုလည်း သင်္ဘောစေးဖြင့်သုတ်လိမ်းကုသပေးပါက တစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။ ကြွက်နို့ သင်္ဘောစေးဖြင့် လက်ချားမှုန့်ကို ရေဖြင့်ရောစပ်ပြီး ကြွက်နို့အားလိမ်းကြည့်ပါ။ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့်အဖြေတစ်ခုရရှိ လာပါလိမ့်မည်။ လက်ချားကို ပရဆေးဆိုင်များတွင်(၅၀၀)ဖိုးဝယ်ပါက ဆေးအသုံးအတွက်လုံလောက်စွာရရှိပါသည်။ လက်ခြားသည်လည်း အဂ္ဂိရတ်နှင့် တိုင်းရင်းဆေး လောကတွင်သာမက လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများတွင် များစွာအထောက်အကူပေးသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ အကိုးအကား…
Khant Hein November 14, 2017 Health, ဆေးပညာ No Comments
ပန်းနာအမြစ်ပြတ် ================ (မျှော့နှင့်ပျားရည်) ဦးသောင်းဆေးနည်းလည်းစုံလှပြီး၊သက်သာ သလိုနှင့်ပြန်ဖြစ်မြဲ။ အခုတော့ပျောက်ပြီ။ ဝေဒနာခံစားရသူအတွက် မျှော့သည်လည်းဆေးဖက်ဝင်သည်မို့ မရွှံ့ မရှာသောက်သုံးခဲ့၍ အမှန်ပင် ပျောက်ကင်းခဲ့သည်ဆိုပါသည်။ သွေးမစုပ်ရသေးသော လယ်မျှော့တစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီး ဖန်ပုလင်းထဲပျားရည်ထည့်၍မျှော့ကိုထားပေး ရခြင်းဖြစ်သည်။ မျှော့သည် ပျားရည်ကို စုပ်ရင်း စုပ်ရင်းကမစုပ်နိုင်တော့ဘဲ သေဆုံးသွားတော့သည်။ မျှော့အသေကောင်ကိုပျားရည်ပုလင်းထဲ ဆက်ထားရင်း တဖြည်းဖြည်း မျှော့ကောင်အရည်ပျော်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ နေစဉ် အိပ်ရာဝင်တိုင်း စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်းမျှသောက်ပေးရပါမည်။ ထိုဆေးနည်းဖြင့် ပန်းနာဝေဒနာခံစားနေရသူတို့ သက်သာပျောက်ကင်းသည်ဟုဆိုထားပါသည်။ လိုသူတို့သုံးဗဟုသုတဆေးနည်းတစ်ခုအတွက်ပြုံးနိုင်ကြပါစေ ကိုးကား နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၃၅၃) ပန်းနာရောဂါအတွက်ဆေးနည်း #ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)$$$$ Unicode…
Khant Hein November 9, 2017 ဆေးပညာ No Comments
ပန်းနာအမြစ်ပြတ် ================ (မျှော့နှင့်ပျားရည်) ဦးသောင်းဆေးနည်းလည်းစုံလှပြီး၊သက်သာ သလိုနှင့်ပြန်ဖြစ်မြဲ။ အခုတော့ပျောက်ပြီ။ ဝေဒနာခံစားရသူအတွက် မျှော့သည်လည်းဆေးဖက်ဝင်သည်မို့ မရွှံ့ မရှာသောက်သုံးခဲ့၍ အမှန်ပင် ပျောက်ကင်းခဲ့သည်ဆိုပါသည်။ သွေးမစုပ်ရသေးသော လယ်မျှော့တစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီး ဖန်ပုလင်းထဲပျားရည်ထည့်၍မျှော့ကိုထားပေး ရခြင်းဖြစ်သည်။ မျှော့သည် ပျားရည်ကို စုပ်ရင်း စုပ်ရင်းကမစုပ်နိုင်တော့ဘဲ သေဆုံးသွားတော့သည်။ မျှော့အသေကောင်ကိုပျားရည်ပုလင်းထဲ ဆက်ထားရင်း တဖြည်းဖြည်း မျှော့ကောင်အရည်ပျော်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ နေစဉ် အိပ်ရာဝင်တိုင်း စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်းမျှသောက်ပေးရပါမည်။ ထိုဆေးနည်းဖြင့် ပန်းနာဝေဒနာခံစားနေရသူတို့ သက်သာပျောက်ကင်းသည်ဟုဆိုထားပါသည်။ လိုသူတို့သုံးဗဟုသုတဆေးနည်းတစ်ခုအတွက်ပြုံးနိုင်ကြပါစေ ကိုးကား နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၃၅၃) ပန်းနာရောဂါအတွက်ဆေးနည်း #ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)$$$$ Unicode…
News ကင်ဆာသမားများအတွက် ဆေးတစ်ခွက် မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည် ကို 🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕 ၈ လ ဆက်တိုက် မနက်တိုင်း စွဲစွဲ မြဲမြဲ သောက်ပြီးတဲ့ နောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက် ကလေးစာပေတွေကို ရေးသားတဲ့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ Mrs Ann Cameron ကတော့ သူမရဲ့ အံသြစရာ အတွေ့အကြုံကို ဝေမျှ ခဲ့ပါတယ်.. သူမ ဘ၀ မှာ ပထမဆုံးခါးသီးစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရောဂါ ကတော့ ဓာတု ကုထုံး…
admin October 18, 2017 ဆေးပညာ No Comments
ကင်​ဆာသမားများအတွက်​ ​ဆေးတစ်​ခွက်​မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည် ကို🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕
ကင်​ဆာသမားများအတွက်​ ​ဆေးတစ်​ခွက်​ မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည် ကို 🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕 ၈ လ ဆက်တိုက် မနက်တိုင်း စွဲစွဲ မြဲမြဲ သောက်ပြီးတဲ့ နောက် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက် ကလေးစာပေတွေကို ရေးသားတဲ့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ Mrs Ann Cameron ကတော့ သူမရဲ့ အံသြစရာ အတွေ့ အကြုံကို ဝေမျှ ခဲ့ပါတယ်.. သူမ ဘ၀ မှာ ပထမဆုံးခါးသီးစွာ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ ရောဂါ ကတော့…
ပန်းနာရင်ကျပ် တသက်လုံး ပျောက်ဆေး ========================== ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါရှိသူများအတွက် တစ်သက်လုံးပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်းကောင်း ပေးလိုက်မည်၊ မိတ္ထိလာမြို့မှ အဘိုးကြီးတဦး နှစ်နှစ်ကြာကြာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ဖြစ်နေခဲ့ရာ လူပြောများ၍ ပဲစဉ်းငုံ အလုံးလိုက် တစ်နေ့နို့ဆီဘူး တလုံးကျ ပြုတ်၍ ဆားခတ်ပြီး အစမ်းသဘောဖြင့် နေ့စဉ်စားနေခဲ့သည်၊ စားနေရင်း နေရထိုင်ရတာ သက်သာလာပုံ ခံစားရသည် ဆို၏၊ ထို့ကြောင့် အားတက်၍ နေ့စဉ်ပုံမှန် ဆက်စားနေခဲ့ရာ ၃- လကြာလျင် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားပုံ လက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း ရောဂါပျောက်သူ၏ တူ ကျောင်းဆရာကြီး…
admin October 17, 2017 ဆေးပညာ No Comments
တပတ်အတွင်း B ပိုး လုံးဝပျောက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
တပတ်အတွင်း B ပိုး လုံးဝပျောက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း တကယ် ကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေး ဖြစ်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ရပါတယ်။ ငွေကြေး အမြောင်အများ မကုန်သည့်အတွက် အဆင်ပြေ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရောဂါကုထုံး (၁) စပါးလင် လိုအပ်ပါတယ် ။ (၂) ၎င်းကို ရေစင်အောင် ဆေးကြောပါ ။ (၃) ပြုတ်လိုက်ပါ ။ (၄) ၎င်းပြုတ်ရည်ကို တစ်နေ့ကို သုံးကြိမ် သောက်ပေးပါ ။ (၅) သောက်ရမည့်…
တပင်တိုင်မြနန်း ရဲ့ အထွေထွေဆေးဖက်ဝင်ပုံ
<< တပင်တိုင်မြနန်း ရဲ့ အထွေထွေဆေးဖက်ဝင်ပုံ >> (၁) အရွက်၊ ပင်စည် နှင့် ဥများကို စားဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့ လိမ်းဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (၂) တပင်တိုင်မြနန်းပင် အဖြူ-အနီ-အနက်ရောင် အမျိူးအစားအားလုံးရဲ့ အမြစ်ဥတွေက မြစ်ပွားနာအပါအ၀င် အဖု၊ အကျိတ်၊ အနာများ အား သွေးလိမ်းရုံဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။(သို့ မဟုတ်) အဖု၊ အကျိတ်၊ အနာများပေါ်တွင် အရွက်ကို အစိမ်းလိုက်ချေ၍ အုံကပ်ထား ခြင်းဖြင့်လည်း သက်သာပျောက်ကင်း စေပါတယ်။ (၃) မြေအောက်မြစ်လျှောက် ပင်စည်ပွားဖြစ်တာကြောင့် ကင်ဆာကဲ့သို…
admin October 15, 2017 ဆေးပညာ No Comments
ဒီနေ့ ကျွန်တော် သဘာဝ သွေးတိုးကျဆေးအကြောင်း ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ သွေးတိုးရောဂါကို(Hypertension)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွေးတိုးကျအောင် သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ(Garlic)ဟာ သွေးတိုးကျစေပါတယ်။ If you cannot handle eating the entire clove raw, holdaslice of garlic in your mouth and try sucking on the juices for 15 minutes. ကြက်သွန်ဖြူဟာ…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ သဘောင်္ရွက်အစွမ်း
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ သဘောင်္ရွက်အစွမ်း ================================ မန်းလေးတိုင်းမြင်ခြံခရိုင် ငါန်းဇွန် မြို့ ပေါ်က ကျွန်တော် အိမ်ဘေးက ၂၂နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးရောဂါစဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စဖြစ်တဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုက်မှာ ဘာရယ်မသိတဲ့ အလုံးလေး စတည်လာပါတယ်။ . အဲ့မှာ တောဓလေ့ မြန်မာပီပီအချို့က ဗိုက်ကြီးတယ်ပြောလို့ပြော လင်ပြောရမှာရှက်တာနေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့ မိဘတွေကလဲရိုးချက်သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများပြောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတင်ပြီး မကြည်ပါတော့တယ်။ . ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထက် ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခက်မှု့ဒဏ်ကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး .တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိန်ခြုံးချိလာပါတော့တယ်။ . ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်တဲ့…
admin October 14, 2017 ဆေးပညာ No Comments